सेमील्ट विशेषज्ञले वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू लागू गर्न 10 तरिकाहरूको वर्णन गर्दछ
वेब स्क्रैपिंग एक तरिका मा गरिन्छ, र त्यहाँ फरक छ एक विशेष काम पूरा गर्न तरिका। यो सक्रिय विकास, महत्वाकांक्षी प्रारम्भहरू र कृत्रिम खुफिया, मानव-कम्प्युटर अन्तरक्रिया, र पाठ प्रशोधनको क्षेत्रमा प्रमुख सफलताहरू भएका एक उन्नत क्षेत्र हो। वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू ल्याईएको, डाउनलोड गर्नुहोस् र चयन गरिएको डेटा निकाल्नुहोस्, तपाइँलाई वांछित ढाँचाहरू प्रदान गर्न। विभिन्न उपकरणहरूले तपाइँले सेकेण्ड भित्र सयौं हजार URL हरूबाट डेटा सङ्कलन गर्न अनुमति दिन्छ। यहाँ वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू प्रयोग गर्न केही तरिकाहरू छन्।
1. सामग्री र अनुयायीहरू
सामग्रीहरूको विश्लेषण गर्नको लागि प्रतियोगीहरूको ब्लगहरू र सोशल मिडिया प्रोफाईलहरू राम्रो ठाउँ हुन्। सायद, यो स्किस्क्रैकर प्रविधि प्रयोग गर्न को लागी ढोका खोल्नुहुनेछ र प्रतिद्वंद्वहरुको आधार बनाउनु हुनेछ। तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ कि कति अनुयायीहरू छन् र तिनीहरूले कति समीक्षा गर्दैछन् र तिनीहरूको पृष्ठहरू मन पराउँछन्। राम्रो निकालेका डाटाले तपाईंको प्रतियोगीको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंको ब्रान्ड अधिक सोशल मिडियामा अनुयायीहरू र तपाईंको वेबसाइटमा अधिक ट्राफिकमा ड्राइभिङ प्रदान गर्न सक्छ।
2. पत्ता लगाउने
एक राम्रो खरगोशले विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट मद्दत, पत्ता लगाउन, स्क्रैप र जानकारी प्राप्त गर्नेछ। हामी सजिलै हाम्रा औंलाहरू हाम्रा प्रतियोगीहरूको पल्समा राख्न सक्दछौं र उनीहरूका उत्पादनहरू, प्रचार अभियानहरू, ब्लग पोष्टहरू, र मार्केटिङ रणनीतिहरूको विचार प्राप्त गर्न सक्छौं। राम्रो स्क्रैप गरिएको डाटाको साथ, हामी हाम्रो ब्रान्डको मार्केटिङ रणनीतिहरू समायोजन गर्न सक्छौं र यो परिवर्तनले हाम्रो व्यापारलाई फाइदा उठाउनेछ।
तपाईं विशाल जानकारी जस्तै ग्राहकहरूले कसरी Yelp, Google, Trustpilot, TripAdvisor, Zomato, Amazon र Yahoo बाट उपयोगी जानकारी स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको समीक्षा गरेका छन्। सोशल मिडिया साइटहरू खोल्नुहोस् र उपयोगी डेटा प्राप्त गर्न स्क्र्याप गर्न ब्रान्डहरू वा उत्पादनहरू खोज्नुहोस्। यो स्क्रैप गरिएको जानकारी प्रतियोगी कमजोरीहरू, उजुरी, र मुद्दाहरूबाट लाभको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
4 - asset equipment appraisals & brokerage. मूल्य तुलना
तपाईं मूल्य तुलना र ट्र्याकिङको लागि डेटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँका प्रतियोगीहरू एक विशेष उत्पादनका लागि चार्ज गर्दै छन् र तिनीहरूका वेबसाइटहरूमा एउटै सीरीजका कतिवटा उत्पादनहरू छन्। मूल्य तुलना अनलाइन रिटेलरहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, र स्क्रैपर्ड डेटा एक राम्रो तरिकामा मूल्यहरू तुलना गर्न एकमात्र तरिका हो। उदाहरणका लागि, किराने पसल चेन्जहरू (सेन्सेबरी, वेट्रोस र टेस्को) वेब स्क्रैपिंग प्रयोग गर्छन् उनीहरूको मूल्य निर्धारण रणनीतिको भागको रूपमा।.तिनीहरू हरेक दिन धेरै वस्तुहरू स्क्रैप गर्छन् र उनीहरूको फरक उत्पादनहरूको मूल्यहरूको तुलना गर्न यो जानकारी प्रयोग गर्छन्।
5. खोज इञ्जिन अनुकूलन
साइटमा आउने यातायातले भुक्तानी ट्राफिक, सोशल मिडिया ट्राफिक, इ-मेल, रेफरल र अरु जस्ता च्यानलहरू आइपुगेको छ। हामीमध्ये धेरैको लागि, यो एक जैविक खोज हो जुन पाइको ठूलो टुक्राको सेवा गर्दछ। तर अरूको लागि, यो ट्राफिक केहि छैन र तिनीहरूले कुनै अन्य रणनीति भन्दा बढी खोज इन्जीन अनुकूलनमा फोकस गर्छन्।
6. मार्केट रिसर्च
सबै व्यापारीहरू जान्छन् कि बजार अनुसन्धान व्यवसायको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। तपाईं बजार अनुसन्धान मार्फत अवसरहरू, प्रवृत्तहरू, र खतराहरू जाँच गर्नुपर्नेछ। एकपटक डेटा प्रतियोगीहरूको साइटहरूबाट स्क्रैप गरिएको भएपछि एकपटक, सबै जानकारी सजिलै प्राप्त हुन्छ, र तपाईं कसरी उचित बजार अनुसन्धानको साथ आफ्नो व्यवसाय कसरी विकास गर्ने विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वेब स्क्रेटरहरूले बजार अनुसन्धान फर्महरू, विश्लेषणात्मक प्रदायकहरू, अनलाइन निर्देशिकाहरू, समाचार वेबसाइटहरू र उद्योगका ब्ल्यागहरूबाट आवश्यक डेटाहरू हटाउन सक्दछ। तपाईं यस डेटाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँको सञ्जाललाई विश्वव्यापी विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
7. जागिर शिकार र भर्ती
यदि तपाई नयाँ जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले रोजगारको दर्जनौं बोर्ड, सामाजिक मिडिया साइटहरू र फोरमहरू स्क्रैप गर्नु पर्छ। तपाईं डिजिटल बुलेटिन साइटहरू र वर्गीकरण सूचीबाट पनि उपयोगी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईं आफ्नो संगठनको लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्क्रैप गरिएको डेटा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँका आवश्यकताहरूमा आधारित परिणामहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तरिकामा, वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरूले नौकरी बजारमा के गरिरहेको बारेमा उपयोगी जानकारी पाउनेछन्, कसरी सही उम्मेद्वारहरू र कसरी सपना देखाउने काम गर्ने काम गर्ने।
8. उत्पादन र सेवा
सबै हामी इन्टरनेटमा उत्पादन र सेवाहरू खरीद गर्छौं। ग्राहकको रूपमा, हामी उपयोगी डेटा प्राप्त गर्न निर्देशिकाहरू प्रतिलिपि र एकत्र गर्न सक्छौं। हामी मूल्यहरू र समीक्षाहरूको तुलना गर्नका लागि जान्न सक्छौं कुन उत्पादनहरू र सेवाहरू सबैभन्दा उपयुक्त छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं प्रयोग गरिएका वाहनों को सूची विभिन्न प्रकार को साइटहरु बाट आफ्नो आवश्यकताहरु लाई मेल खा सकते हो। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं विभिन्न स्मार्टफोन्सको समीक्षाहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कुन विचारलाई कुन ब्रान्डलाई अरूलाई हावामा पार्ने विचार छ। केहि स्मार्टस्टाइलहरू आईफोन, विन्डोज मोबाइल र ब्ल्याकबेरी हुन्।
9। वित्तीय योजना
वेब स्क्रैपिंग उपकरणको साथ, तपाईं स्टक एक्सचेन्ज साइट्स, सम्पत्ति वेबसाइटहरु बाट डाटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न पोर्टलहरूको समीक्षाहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। वित्तीय लाभका लागि। तपाइँले वर्तमान मार्केटिंग प्रवृत्तहरूको बारेमा सूचित रहनु भएको विवरणहरू इकट्ठा गर्न यो सजिलो बनाउनेछ।
10. खरिद गर्न वा किन्न खोज्दै
वेब स्क्रैपिंगको राम्रो विचारको लागि, तपाईंले अचल सम्पत्ति एजेन्सीहरूलाई विचार गर्नुपर्दछ। यदि तपाईं केहि किन्नु वा भाडामा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा डेटा स्क्रैप गर्न आवश्यक छ र कस्तो प्रकारको सम्पत्तीको बारेमा तपाईंलाई थाहा छ। घर शिकारीको रूपमा, तपाईं विभिन्न एजेन्टहरू, सूचीहरू, एकत्रित साइटहरूबाट राम्रो-संगठित डाटासेट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।